Sida Loo Sameeyo Xariirka Wararka CryptoCurrency (Qalab 4 ah) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loo abuuro Xariirka Wararka CryptoCurrency (4 Tallaabo)
Sida loo abuuro Xariirka Wararka CryptoCurrency (4 Tallaabo)
Boqortooyada cryptocurrency waa meel si joogto ah isu beddesha. La socoshada wixii u dambeeyay iyo lacagaha cusub waxay noqon kartaa caqabad. Sidaa darteed, waxay kaa caawinaysaa inaad haysato hal goob si aad u hesho macluumaadka ku saabsan cusbooneysiinta muhiimka ah.
Haddii adiga ama dhagaystayaashaadu aad xiisaynayso goobtan, waxaad bixin kartaa kheyraad qiimo leh adigoo abuuraya bogga wararka cryptocurrency. Kani waa degel kulmiya dhammaan wararka iyo horumarka cryptocurrency, oo u sahlaysa booqdayaasha inay si degdeg ah u kiciyaan.
Maqaalkan, waxaan ka hadli doonaa wax yar oo ku saabsan sababta bogga wararka cryptocurrency faa'iido u leeyahay. Kadib waxaan kugu socon doonaa sida loo abuuro mid. Aan shaqada helno!
Waa maxay sababta Xariirka Wararka CryptoCurrency uu u noqon karo kheyraad qiimo leh
Marka intarneedku sii weynaado, way adkaanaysaa in la helo macluumaadka aad u baahan tahay. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay goob niche ah sida cryptocurrency. Haddii aad raadinayso inaad la socoto wax cusub, waxaa laga yaabaa inaad si joogto ah u hubiso darsin goobood oo kala duwan.
Xariirka wararka ayaa xal fiican u ah dhibaatadan. Kani waa shabakad ururisa maqaallada wararka, qoraalada blog-ga, iyo waxyaalaha kale ee dhawaanahan ku saabsanaa mawduuc gaar ah, oo ku soo bandhiga dhammaan hal meel ku habboon.
Tusaale ahaan, waxaad ka eegi kartaa 'Crypto Headlines', oo ah bogga wararka cryptocurrency ee aan isku geyno:
Naqshadaynta goobta ayaa ka caawisa booqdayaasha inay si sax ah u helaan waxa ay si dhakhso ah u raadinayaan. Wararka waxaa abaabula ilo, waxaana sidoo kale loo kala qaybiyaa dhexdhexaadin sida muuqaallo iyo muuqaalo. Kuwa xiiseeya cryptocurrency, goobtan oo kale waxay ku siinaysaa dhammaan macluumaadka ay u baahnaan doonaan marka la eego.
Haddii dhagaystayaashaada jira ay xiisaynayaan cryptocurrency, ama aad raadinayso inaad ka qayb qaadato goobta, waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso abuurista boggaaga wararka. Nasiib wanaag, tani maaha hawl adag.
Waxaan aad ugu talineynaa isticmaalka WordPress si aad u abuurto boggaaga wararka cryptocurrency. Ma aha oo kaliya madal awood leh oo dabacsan, waxay sidoo kale siisaa marin u helka aaladaha fududeynaya in lagu daro astaamaha muhiimka ah ee boggaaga.
Sidaa darteed, waxa ugu horreeya ee aad rabto inaad sameyso waa inaad dejiso degel cusub oo WordPress ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad doorato magac domain, oo aad iibsato qorshaha martigelinta shabakada. Intaa ka dib, waxaad diyaar u tahay inaad bilowdo!
Tallaabada 1: U dooro Mawduuc boggaaga
Marka hore, goobtaadu waxay u baahan doontaa mawduuc. Xor ayaad u tahay inaad doorato wax kasta oo aad jeceshahay, laakiin waa fikrad wanaagsan inaad doorato mawduuc-wareedka. Tani waxay aad ugu dhowdahay inay bixiso sifooyinka iyo qaabaynta aad u baahan doonto.
Waxaa jira xitaa mawduucyo gaar ah oo aad isku dayi karto, sida Crypto ka MyThemeShop:
Kani waa mawduuca aan u isticmaalnay boggayaga wararka cryptocurrency waxayna bixisaa tiro bandhigyo iyo qaabayn ah oo ku habboon ujeedadan. Crypto waxay sidoo kale fududaynaysaa in la soo bandhigo qiimaha, abuuro bogag gaar ah oo loogu talagalay lacago gaar ah, iyo wax ka badan.
Talaabada 2: Ku rakib oo habee WP RSS Aggregator Plugin
Uruurinta wararka iyo cusboonaysiinta boggaaga wararka cryptocurrency gacan ahaan waxay noqon doontaa geeddi-socod waqti badan qaadata. Nasiib wanaag, waxaad badbaadin kartaa waqti badan adiga oo isticmaalaya WP RSS Aggregator plugin:
Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa inaad isku geyso RSS iyo Atom quudinta WordPress. Waxaad iska qori kartaa wax kasta oo quudin ah oo aad jeceshahay, ku dhex dari karto goobtaada, oo aad si toos ah u soo bandhigi kartaa natiijooyinka. Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan tirada ilaha iyo wararka aad la shaqeyn karto.
Ka dib marka la rakibo oo kiciyo plugin, waxaad dejin kartaa quudintaada ugu horreysa adiga oo tagaya Isku-duwaha RSS> Kudar Cusub dashboardkaaga:
Waxaad dooran kartaa URL, go'aamina sida nuxurka quudinta loo daabici doono, dooro inaad soo dejiso sawirro iyo in kale.
Kadib markaad ku darto quudinta aad rabto inaad lasocoto, waxaad ka heli kartaa dhamaantood hoos ku qoran Ilaha Quudinta:
Waxaad sidoo kale hoos ka daawan kartaa sheekooyinka gaarka ah Alaabta Quudinta or Posts, iyadoo ku xidhan sida aad jeceshahay inaad u soo bandhigto:
Waxaad ku soo bandhigi kartaa quudinta aad dooratay dhinaca hore ee goobta adoo isticmaalaya koodka gaaban. Koodhka gaaban ee aasaasiga ah ee WP RSS Aggregator wuxuu u eg yahay sidan:
Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa mid aad loo habeyn karo, si aad u dooran karto ilaha la soo bandhigay iyo sida. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habaynta summadan gaaban, fiiri dukumeentiyada plugin. Dabadeed, si fudud ugu dheji koodka bog, boosto, nooca nuxurka gaarka ah, ama aagga widget, iyo booqdayaashu waxay awoodi doonaan inay arkaan walxaha quudinta cusub marka la daabacayo.
Sida aad arki karto, dejinta ilaha quudinta waa hab degdeg ah oo fudud - sida iyaga soo bandhigaya. Intaa waxaa dheer, waxaad soo dhoofsan kartaa noocyo badan oo ka mid ah waxyaabaha la xiriira cryptocurrency, laga bilaabo qoraalada blog-ka iyo maqaallada wararka ilaa fiidiyowyada, podcasts, iyo xitaa shaqooyinka.
Waxa kale oo xusid mudan in, iyadoo aan isticmaalnay WordPress' Editor Classic si aan u dejino boggayaga wararka, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Tifaftiraha cusub ee Block. Dhab ahaantii, horumarinta WP RSS Aggregator waxay ka shaqeynayaan shaqeynta laxiriirta xannibaadda taas oo sahlaysa in la dejiyo qaab-dhismeedka mustaqbalka mustaqbalka - sabab kale oo plugin ah waa qalab muhiim ah.
Talaabada 3: Abaabul Qaabka Mawduucaaga
Adigoo isticmaalaya habka kor lagu sharaxay, waxaad si aad ah u soo bandhigi kartaa wararka cryptocurrency meel kasta oo ka mid ah goobtaada. Si kastaba ha ahaatee, halkii aad si fudud ugu dhejin lahayd feed kasta bog, si kastaba ha ahaatee, waxaad si taxadar leh u habayn kartaa habka qoraalkaaga loo dhigay. Tani waxay sahlaysaa in la fahmo oo la isticmaalo.
Beddelka isticmaalka muujinta koodka gaaban ee WP RSS Aggregator, waxaad u soo dhoofsan kartaa waxa ku jira Boostada oo aad ku muujiso meel kasta oo ka mid ah goobtaada. Si taas loo sameeyo, waxaan soo jeedineynaa isticmaalka ContentViews plugin:
Tani waxay awood kuu siin doontaa inaad si fudud u dejiso shabaqyada iyo liisaska noocyo gaar ah oo ka kooban boggaaga. Tusaale ahaan, waxaad abuuri kartaa hal aragti oo ka kooban maqaallada wararka, mid kalena podcasts, iyo mid saddexaad oo shaqo ah. Mid kasta, waxaad ku habeyn kartaa macluumaadka ku jira iyo sida loo muujiyo:
Aragtida Qalabka waa qalab kale oo heli kara shaqada la dhammeeyay (iyadoo la bixinayo doorashooyin badan). Qalab kasta oo aad isticmaasho, waa caqli badan tahay inaad wakhtigaaga ku qaadato tallaabadan, oo aad hubiso in qaabaynta boggaaga wararka cryptocurrency uu yahay isticmaale-saaxiibtinimo intii suurtagal ah.
Talaabada 4: Samee Plugins Dheeraad ah sida loo baahdo
Halkaa marka ay marayso, waxa aad haysataa bogga wararka oo si buuxda u shaqaynaya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr plugins oo kale oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso rakibidda.
Si aad u soo koobto qaabka goobtaada, waxaan kugula talineynaa inaad soo qaadato:
CryptoWP: Qalabkani waxa uu awood kuu siinayaa in aad si fudud u soo bandhigto qiimaha hadda ee lacago kala duwan.
MonsterInsights: Qalabkan, waxaad kula socon kartaa cabbirka goobtaada Google Analytics.
Foomamka Ninja: Abuuritaanka foom xidhiidhka fudud ayaa u sahlaysa booqdayaasha inay la xidhiidhaan.
Maamul WP: Furahaan ujeedo badan leh waxay kaa caawineysaa inaad si wanaagsan u maamusho amniga portal-kaaga wararka cryptocurrency, cusbooneysiinta, kaydinta, iyo in ka badan.
Dabcan, waxaa jira plugins kale oo badan oo mudan in la hubiyo sidoo kale! Si kastaba ha ahaatee, waxa fiican inaad ka dhigto boggaaga wararka mid fudud oo toos ah, oo aad si cad u ilaaliso nuxurka quudintaada.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waa goob xiiso leh - ma aha ugu yaraan taas oo ah sababta oo ah sida ugu dhakhsaha badan ee ay isu beddesho. La socoshada wax walba waxay dareemi kartaa shaqo waqti buuxa ah, taas oo ah sababta ay faa'iido u leedahay in la haysto dukaan-joojin ah wax kasta oo la xiriira crypto.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in samaynta boggaaga wararka cryptocurrency aysan ahayn mid adag. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa:
U dooro mawduuc goobtaada, sida Crypto.
Ku rakib oo habee WP RSS Aggregator plugin
Abaabulka qaabka macluumaadkaaga, addoo isticmaalaya plugin sida ContentViews ama Toolset Views.
Deji baloogyo dheeraad ah sida loogu baahdo (tusaale, CryptoWP iyo MaareeWP).
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo dejiyo oo loo isticmaalo plugins-yada aan soo bandhignay? Weydii qaybta faallooyinka ee hoose!
Xuquuqda sawirka: Pexels.
SEO: Cilmi-baaris Keyword Free ah oo 3 Tallaabo ah